वामदेव कमरेडले प्रतिनिधिसभामा जितेर प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ – नेम्वाङ – Online National Network
१४ फाल्गुन २०७६, बुधबार ०४:५२
संविधान संशोधनको गृहकार्य गर्न नेकपाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यदलमा बस्न किन अस्वीकार गर्नुभयो ?
पहिलो कुरा, कार्यदल अस्तित्वमा आयो भन्ने मलाई लागेको छैन । पार्टीले मलाई त्यसको सदस्य बनाएको थाहा छैन । महासचिवले त्यस्तो कुनै कार्यदल बनाएका छैन भन्नुभएको छ । दोस्रो कुरा, जुन ढंगले कार्यदल बन्यो भनेर चर्चामा आयो, त्यस्तो कार्यदल हाम्रो जिम्मेवार पार्टीले बनायो होला भन्ने विश्वास नै भएन । त्यस्तो खालको कार्यदलमा बसेर काम गर्नुको अर्थ पनि रहेन ।
संविधान संशोधन कस्तो अवस्थामा हुन्छ रु संशोधन कसरी हुन्छ रु हाम्रै पार्टीको अडान के रहेको छ भन्ने सबै विषय विस्तृत रूपमा बताउँदै मैले माधव कमरेडलाई यस्तो प्रस्ताव ठीक भएन भनेँ । कार्यदल बनाएको हो भन्ने त मलाई लाग्दैन, तर बनाएको भए पनि यो कुरा कुनै पनि हालतमा ठीक हुँदैन, यसतर्फ हामी जानुहुँदैन भनेँ ।
मेरो विचारमा संविधान संशोधन देश र जनताको हितमा हुनुपर्छ । यो आवश्यकता र औचित्यका आधारमा निष्कर्षमा पुग्ने कुरा हो । संविधान संशोधन एकदमै औपचारिक र पारदर्शी प्रक्रिया हो । तर, त्यो प्रक्रियामा जे–जति कुराहरू आएका छन् त्यसमा सहमत हुन सकिँदैन । तपाईं पनि सहमत हुनुहुँदैन भनेर उहाँसँग आफ्ना तर्क राखेको हुँ ।
उहाँले कार्यदल संयोजकका हैसियतमा बैठक बस्न तपाईंहरूलाई बोलाउनुभएको होइन र ?
उहाँले बिहान फोन गर्नुभएको थियो । मैले कार्यदलबारे दशथरी कुरा आएका छन्, तपाईंलाई कार्यदल संयोजक र हामीलाई सदस्य भनिएको छ, त्यसैका लागि बोलाउनुभएको हो भने त्यसो नगरौँ भनेर प्रस्ट भनेँ । तपाईंले बोलाउँदा म जहाँ पनि आइहाल्छु, तर यो विषयमा मेरो छुट्टै मत छ, म कमरेडलाई भनुँला भनेँ । त्यसपछि अनौपचारिक कुरा गरौँ भनेरै बोलाउनुभयो । अनि मात्र हामी उहाँलाई भेट्न पुगेका हौँ ।
त्यसमा माधव नेपालको प्रतिक्रिया के आयो ?
हाँस्नुभयो । मेरो भनाइमा उहाँ एकदमै सकारात्मक हुनुहुन्छ । तपाईंले उठाउनुभएको कुरा गम्भीर र जायज छ भन्नुभयो । यो सन्देश पार्टीसमक्ष पुर्‍याइदिन्छु भन्नुभयो ।
नेकपाका सबैजसो शीर्ष नेता संसद्मा छन् । तर, वामदेव गौतमले निर्वाचन हार्नुभयो र उहाँ संसद्बाहिर हुनुहुन्छ । उहाँलाई मनोनीत गरेर राष्ट्रिय सभामा लग्ने पार्टीको निर्णय परिपक्व हो कि होइन ?
उहाँले पार्टीका लागि धेरै योगदान गर्नुभएको छ । निरन्तर पार्टीको काममा क्रियाशील हुनुहुन्छ । वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ । त्यसैले अहिलेको राजनीतिको सन्दर्भमा उहाँजस्तो नेता संसद्भन्दा बाहिर रहने कुरा बेठीक हो । त्यसमा विवाद हुँदैन । तर, विषय के हो भने संसद्लगायत कुनै पनि ठाउँमा हाम्रा नेताले जाने कुरा प्रक्रियासम्मत हुनुपर्छ ।
संविधानसम्मत हुनुपर्छ । त्यो हामीले नै स्थापित गरेको मूल्य–मान्यताअनुरूप हुनुपर्छ । अहिले संशोधनका नाममा जे–जस्ता कुरा आएका छन्, त्यो उहाँको र पार्टीको गरिमाअनुसार भएन ।
अहिले त जनमत पनि पार्टीको यो गृहकार्यविरुद्ध देखिन्छ । उहाँलाई तपाईंको सुझाब के छ ?
उहाँलाई म सम्मान गर्छु । आदर गर्छु । मेरा लागि प्रिय हुनुहुन्छ । उहाँप्रति शुभकामना रहन्छ । यो तहमा पुगेर पनि उहाँ पार्टीको अध्यक्ष भइनसकेको, प्रधानमन्त्री भइनसकेको नेता हुनुहुन्छ । उहाँले प्रधानमन्त्री पद पाउनुहुन्छ, तर प्रधानमन्त्री बन्ने दुई बाटा छन् ।
एक– गलत बाटो । अहिले बजारमा आएको चर्चा गलत बाटो हो । र, अर्को सुल्टो र सही बाटो । त्यो भनेको जनताबाट अनुमोदित भएर संसद्मा प्रवेश गर्ने । त्यसका लागि अहिले उहाँ जसरी पार्टीमा क्रियाशील हुनुहुन्छ, त्यसैगरी तीन वर्ष क्रियाशील रहने । अनि, पार्टीका तर्फबाट निर्वाचनमा उत्रेर तीन वर्षपछि प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गर्ने र हाम्रोतर्फबाट प्रधानमन्त्री बन्ने ।
उहाँलाई संसद्मा लैजाने योजना देशको आवश्यकता भन्दा पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक दाउपेचको परिणाम हो भनिन्छ, तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?
वामदेव कमरेडलाई म के आग्रह गर्छु भने उहाँलाई ठाउँमा पुर्‍याउन हामीहरू छौँ । अर्को तप्काचाहिँ त्यही ठाउँमा पुर्‍याउँछौँ भन्छन्, तर गलत बाटो देखाउँछन् । यो प्रधानमन्त्री बन्ने ठीक बाटो होइन । यो कुरा वामदेव कमरेडले बुझ्न्हुन्छ होला ।
बुधबार सचिवालय बैठक बस्दै छ । नेताहरूलाई के सुझाब दिनुहुन्छ ?
यदि संविधान संशोधनतर्फ अगाडि बढ्न खोजेको हो भने पार्टीले अहिलेसम्म भनेजस्तै आवश्यकता र औचित्यका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ । र, त्यससँग सम्बन्धित सबै पक्षसँग छलफल गर्दै सही निष्कर्षमा पुग्नका लागि आधार तयार गर्नुपर्छ । त्यो प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ ।- नयाँपत्रिका दैनिक